5 barnaamij oo moobiil ah oo aadan ka maarmi karin naqshadeeye ahaan | Abuurista khadka tooska ah
5 barnaamij cusub oo naqshadeyn ah oo loogu talagalay qalabka moobiilka oo ay tahay inaadan ka maqnaan
In kasta oo ay weli u hadhsan tahay aaladda gacanta awood u leedahay hawsha iyo xusuusta kombuyuutarku haysto, tikniyoolajiyadda noocan ah alaabooyinka ayaa si aad ah u hagaagaysa kolba sannadaha ka dambeeya iyo barnaamijyo markii hore suurtagal ahaa in la hindiso kuwaas oo lahaa booskooda moobiilka, hadda waxaan ogaanay in tayada qaarkood ay tahay mid aad u wanaagsan, marka laga reebo gaarsiinta natiijooyin fiican.
On Android iyo macruufka waxaan leenahay a barnaamijyo kala duwan oo wanaagsan loo isticmaali karo sababaha ugu kala duwan. Sidaa awgeed sababta qoraalkan loogu muujinayo 5 barnaamij oo tayo sare leh labadan OS ee qalabka moobiilka. Barnaamijyo lagu abuurayo vector, lagu sameeyo sawirro deg deg ah qoraalada qaarkood ama dib loogu hagaajiyo sawir leh qiimayaal aad u xiiso badan si loo soo saaro kuwa la qabtay.
1 Cuf isjiidashada
2 Lightroom loogu talagalay Android
Barnaamijkan loogu talagalay iPad-ka wuxuu leeyahay xoogaa aad u qurux badan sida awoodda u beddelaan doodles qaababka 3D si aad ugu daabacato wax dhib ah si aad uhesho natiijo fiican. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad sameysid qaabab 3D caadi ah si caqligal ah adoo adeegsanaya farahaaga si aad u qaabeyso.
Marka foomka la dhammeeyo, waad awoodi kartaa la wadaag dadka kale si loogu diro daabacaad 3D ah. Cuf isjiidadka 'Gravity Skecth' waa lacag la'aan. Soo Degso halkan ka.
Lightroom loogu talagalay Android
Barnaamijkan waxaa loo cusbooneysiiyay gebi ahaanba bilaash si markaa hadda isticmaale kasta oo Android ahi u isticmaali karo iyada oo aan wax xaddidaad ahi jirin, sidaas darteed waxay noqotay mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee sawir-celinta sawir-qaadista ee OS-ka caruusadda cagaaran.
Nooca cusub ee loogu talagalay Android waxaa ku jira taageerada qaadashada shaashadaha Qaabka RAW saafi ah oo leh astaamo runtii aad u fiican sida horudhaca, qalabka dib-u-shaqeynta, iyo awoodda lagu daro heerkulka midabka hooska ama muujinta. Waad kala soo bixi kartaa bilaash.
App Adobe ah sida Lightroom laakiin ka kooban saddex barnaamij oo moobiil ah dhammaantood waxay ku dhex jiraan barnaamijka webka. Waxaa diirada la saaray dhagaystayaal guud halkii laga ahaan lahaa xirfadleyaal naqshadeeya Hab gaar ah oo loo abuuro nuxur deg deg ah oo fudud adigoon marin barnaamijyo waaweyn.
Hadaad raadineyso inaad abuurto sawirro loogu talagalay warbaahinta bulshada ama noocyada kale ee muuqaalka muuqaalka ah, Adobe Spark waa xulasho weyn. Waa lacag la'aan iPhone ama iPad.
Un warqad kumbuyuutar ah loogu talagalay Android iyo iOS oo aad wax ku sawiri kartid, ku qori kartid kuna qori kartid wax kasta oo maskaxdaada ku soo dhaca marka aadan haysan warqad jireed oo bilaash ah. A app qoraal xiiso leh oo xarrago leh oo u taagan u raacida qaabka qaab jireed. Waxay awood u leedahay inay u rogto qoraalada aad ku qoreyso nooca jireed qaab dijitaal ah.
Abuur vectors oo leh barnaamijkan naqshadeynta labada iPhone iyo iPad. Mid ka mid ah barnaamijyada ugu awoodda badan sawir gacmeedka loo heli karo aaladda moobaylka. Waxaa ka mid ah astaamo dhowr ah oo loogu talagalay sawir tayo sare leh isla markaana lagu waafajinayo aaladaha loo maro iCloud.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » 5 barnaamij cusub oo naqshadeyn ah oo loogu talagalay qalabka moobiilka oo ay tahay inaadan ka maqnaan
TOP websaydhyada ugu fiican ee loogu talagalay Adobe Photoshop
+15 xeebta mockups oo ka dhigi doonta naqshadahaaga kuwo aan laga hor istaagi karin